Arsivan'ny marika - 192.168.8.1
The Medialink Ny router dia voamariky ny router tsy misy tariby satria manome ny fifandraisana Wi-Fi. Ny Wireless na Wi-Fi fotsiny dia mamela ny mampifandray fitaovana marobe ohatra amin'ny fahitalavitra marani-tsaina, mpanonta pirinty tsy misy tariby, ary telefaona finday alalana Wi-Fi.
Torohevitra momba ny tenimiafina ao amin'ny MediaLink Router:
Misafidiana passkey sarotra sy sarotra vinavina ho an'ny MediaLink izay ho tadidinao fotsiny.
Tsy maintsy zavatra manokana, ohatra [email voaaro], midika izany fa tsy azonao atao ny mitadidy azy io.
Ny habetsaky ny fiarovana dia miankina mivantana amin'ny intricacy passkey, sy ny ezaka natao mba hiarovana ny passkey an'ny router.
Omeo ny Passkey ho an'ny router izay hotsaroanao (usability aloha). Tsy ilaina ny milaza fa afaka mamorona passkey saro-takarina ianao miaraka amin'ny endri-tsoratra samihafa, isa, grika miampy latina. Na izany aza, amin'ny farany dia hampiditra azy amin'ny sticky ianao ary hametraka izany amin'ny router izay mandresy ny tanjona.
Alter Default Wifi name (SSID) & Passkey plus dia mamela ny Network Encryption
Torohevitra kely fanampiny (satria tsy misy fiantraikany amin'ny fiarovana izany), dia ny manova ny anarana Default Wifi (SSID) satria ho takatry ny hafa ny fahafantaran'ny hafa ny tambajotra ifandraisany.
• Mikaroha - Fikirana mandroso (hita ao anaty boaty menio eo an-tampon'ny pejy fandraisana), & tsindrio eo
• Mikaroha - Setting Wireless (hita ao anaty boaty menio eo an-tampon'ny pejy fandraisana), ary tsindrio eo amboniny
• Mikaroha - Fikirakirana Wireless Wireless (hita ao anaty boaty menio eo an-tampon'ny pejy fandraisana), ary mikapoka eo
Mitadiava Anaran'ny tambajotra (SSID), ity no anaran'ny Wi-Fi an'ny router. Aorian'ny fanoratanao ny anaran'ny tambajotra dia tsy maintsy avelanao ny fanafenana WPA2-PSK amin'ny router. Ity no fenitra fanafenana henjana indrindra azo ho an'ny tambajotra an-trano.
Ampidiro ny Key Key / WI-Fi Passkey an'ny WPA vao haingana - ity ny passkey izay hampiasainao hampifandraisina amin'ny Wi-Fi homebased. Ataovy amina endritsoratra 15-20 izy ary aza mampiasa passkey mitovy izay nampiasanao tamin'ny fidirana amin'ny router MediaLink.
Olana amin'ny fidirana amin'ny router MediaLink:
Tsy miasa ny MediaLink Passkey
Passkeys mahita fomba tsy hiasa! Na, amin'ny hetsika maro, ny mpanjifa dia mahita fomba iray hanakanana azy ireo. Amin'ireo tranga roa ireo dia tadiavo ny fizarana "Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny làlan'ny MediaLink mankany amin'ny fametrahana hatrany".
Hadino ny Passkey mankany amin'ny MediaLink Router
Na nanova ny anarana mpampiasa na tenimiafin'ny MediaLink ianao na tsia dia hadino izany, jereo fotsiny ny fizarana "Ahoana no hamerenana amin'ny laoniny ny router Router MediaLink".
Avereno amin'ny lafaoro default ny router
Satria, zava-dehibe ny fiarovana ny tambajotra, ny asa voalohany sy lehibe indrindra dia ny fanovana ny router MediaLink Default Login & Passkey amin'ny zavatra azo antoka sy manokana.
Araho ny baiko hiditra amin'ny Route Medialink.
Ampifandraiso amin'ny solosaina finday na PC ny tariby misy ny router. …
Tsidiho ny tranokalan'ny tranokala voafantina ary soraty ny adiresy IP an'ny router Medialink ao anaty boaty adiresy. …
Soraty avy eo ny anarana mpampiasa sy tenimiafin'ny router amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny console console. Miditra ianao izao.
Sokajy Brand Leave a comment
By Huawei Teknolojia fiaramanidina & algorithm natokana ho an'ny 5G- entin'ny Wi-Fi 6 dia manampy ny orinasa hamorona tambajotra Wi-Fi 6 mihena ny lavaka fandrakofana, manolotra serivisy tsy misy fotoana mangataka andro ary tsy mahazo fatiantoka fonosana mandritra ny fivezivezena. Io dia ahafahan'ny faritra samihafa, ary koa ny seranam-piaramanidina nomerika, ny fanabeazana dizitaly, ny fampiasam-bola omni-channel, ny governemanta marani-tsaina, ny fahasalamana ary ny fanamboarana marani-tsaina, mandroso amin'ny vanimpotoanan'ny campus tanteraka.
Huawei no mpivarotra lehibe indrindra hampielezana ny vokatra Wi-Fi 6 ary hampiditra azy ireo amin'ny fampiasana orinasa. Hatramin'izao, Wi-Fi 6 Huawei AirEngine APs dia nampiasaina tamin'ny faritra 5 manerana an'izao tontolo izao.
Amin'ny maha-mpamatsy fitaovana telecommunication ambony azy, Huawei dia nanome anjara biriky LTE 4G marobe amin'ireo mpamatsy tambajotram-pifandraisana. Ary maro amin'izy ireo no mahazo toerana ambony amin'ny mpanjifa farany isaky ny fampisehoana avo lenta sy maharitra. Amin'ny alàlan'ny tahan'ny vidiny avo lenta, ny router Huawei tsy misy tariby 4G amin'ny alàlan'ny karatra SIM & seranan-tsambo Ethernet dia lasa malaza any Moyen Orient, Azia, Eropa, faritra amerikana & Afrika. Ireo 4G Mobile Huawei Routers dia malaza indrindra amin'ny mpanjifa noho ny haitao avo lenta sy ny endrika lamaody kanto amin'ny haben'ny paosy hampiasaina.
Miaraka amin'ny fanitarana ny tamba-jotra LTE tsy misy tariby, nanolotra famoronana ny router LTE aza i Huawei mba hihaona amin'ny haitao LTE Pro Advanced farany miaraka amin'ny tambajotra samihafa. Ary ireo taranaka faramparany an'ny router LTE Huawei dia mihodina miandalana miaraka amina singa lamaody kokoa. Ny tena zava-dehibe dia ny LTE Huawei Router amin'ny alàlan'ny port Ethernet & SIM card slot na finday LTE finday dia manome fahombiazana azo antoka sy azo antoka kokoa ho an'ny mpanjifa farany.
Ity boky ity dia manondro ny router EchoLife HG520s Huawei, mbola hihatra amin'ny ankamaroan'ny router Huawei amin'ny ankapobeny.
Mandehana amin'ny router IP address amin'ny fikandrana fitetezana vao tsy ela akory izay.
Ny adiresy mahazatra an'ny router amin'ny configure dia 192.168.1.1.
Tsindrio ny Basic amin'ny takelaka havia.
Ampidiro ny adiresy DNS Open ao amin'ny DNS DNS Primera sy ny serivisy DNS Secondary DNS, avy eo kitiho ny bokotra Alefaso.
Mariho fotsiny ny toe-javatra DNS ankehitriny alohan'ny hanovana ny Open DNS, raha te hijery indray ireo toe-javatra taloha ianao noho ny antony sasany.
Raha vantany vao namboarinao ny fikirakiran'ny DNS anao ary tsindrio ny bokotra Alefaso, dia nanoro hevitra anao izahay fa hamafana ny tranokala DNS resolver hoard & tranokala fitetezana tranonkala hanamafisana fa misy vokany eo no ho eo ny fikirakiranao DNS farany.
Dingana fitarihana fanaingoana
Midira amin'ny Fikirakirana ny pejin-tranonkala Huawei Router amin'ny alàlan'ny firaketana an'ity IP ity ao anaty boaty URL: 192.168.100.1. Ny default default dia:
Teny miafina; admintelecom
Mizotra mankany LAN> DHCP Configuration of Server
Manamarina ny 'Enabling basic DHCP server'
Fanamarinana ny fampandehanana ny DHCP L2 Relay
Midira amin'ny mpizara DNS:
Mba hahafahanao manamboatra ny router an'ny OpenDNS, soso-kevitra fatratra ny hanadiovanao ny cache DNS resolver hoard & ny tranokala fitetezana tranonkala hahazoana antoka fa misy vokany eo no ho eo ny fikirana fikirakirana DNS farany. Ankoatr'izay, raha manana adiresy IP Active ianao dia vakio fotsiny ity lahatsoratra ity izay hitondra anao hamaky ny fomba fanavaozana tsy tapaka ny adiresy IP mavitrika.
Fitsidihana fotsiny: http://www.opendns.com/setupguide/#resultsTest ireo toe-javatra DNS farany.
Mamolavola tambajotra tsy misy tariby ataon'ny matanjaka fijangajangana AC na N router. Misafidy fifandraisana an-tserasera amin'ny PC-nao ve ianao? Tsy misy olana. Amin'ny alàlan'ny router Eminent dia hanana rohy Internet azo antoka sy haingana ianao.
Ireo router malaza dia manana firewall tsotra kely izay manampy amin'ny fiarovana ny tambajotran-tranokalan-tranonao amin'ny fidirana an-tserasera amin'ny alàlan'ny Internet. Satria manakana ny fifandraisana anatiny ny firewall dia mety mila manokatra seranana ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana sy lalao manokana. Ity fomba fanokafana seranana ity dia fantatra matetika amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo satria mandefa seranana amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny tamba-jotra an-trano ianao.
Amin'ny alàlan'ny Eminent Wireless 300N Router dia azonao atao ny mizara ny fifandraisan-davitra amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra manodidina ny 300Mbps. Ity router Wireless N mahery eo akaikin'ny aerials roa ity dia mampiakatra be ny fatranao tsy misy tariby. Apetaho fotsiny ny mpampiasa maro, tariby na tsy misy tariby. Manana tombony amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha, sy ny fomba tsy mitaky ezaka hanambarana ny fifandraisanao. Noho ny hafainganam-pandeha avo lenta, ny Wireless Router dia mety amin'ny filalaovana lalao an-tserasera sy fandefasana mozika sy horonan-tsary.
Ho an'ireo mpanjifa tambajotra nohatsaraina, marina ny mahatakatra fa ny Emcent Wireless Router dia manana endrika sarotra marobe. Ampiharo ny WDS & ny Wireless Bridge miasa mba hanitarana ireo signal tsy misy tariby. Noho ny fikirakira hafainganam-pandeha haingam-pandeha sy ny 'Fanamarinana ny fifamoivoizana' isaky ny IP, seranan-tsambo na Protocol, azonao atao ny miantoka fa afaka milalao na miserasera amin'ny Internet foana ianao.
Ny SSID fanampiny dia mety ampidirina tsy misy ezaka miampy mitoka-monina raha ilaina izany. Io dia ahafahanao manangana tambajotra faharoa ho an'ny mpampiasa vahiny. Mety ho an'ny toerana fandraharahana toy ny hotely na hotspot, ohatra, izay tianao hampisarahana ny vahiny amin'ny tamba-jotra misy anao.
Ny Emcent 300N Wireless Router aza azo ampiasaina amin'ny fitaovana 54 Mbps & 11 Mbps azo alefa. Ho an'ny elanelam-potoana feno & hafainganam-pandeha manodidina ny 300 Mbps, dia nanoro hevitra anao ianao mba hampihatra ireo mpampifandray tambajotram-pifandraisana Emcent.
Ny fomba lehibe indrindra hanokafana seranana dia:
Mametraha adiresy IP raikitra amin'ny PC na fitaovana ilainao handefasana seranana.
Midira ao amin'ny router malaza.
Mandehana any amin'ny sehatry ny fandefasana seranana.
Tsindrio ny switch an'ny Device Setup.
Tsindrio ny rohy Advance Setup.
Tsindrio ny NAT / Transmitting.
Tsindrio ny Port Advancing.
Miteraha fidirana handroso amin'ny seranana.
Na dia mety ho sarotra be aza ny dingana toy izany amin'ny voalohany, mandehana fotsiny amin'ireo dingana etsy ambany amin'ny alàlan'ny router anao.
Zava-dehibe ny fametrahana adiresy IP raikitra ao amin'ilay fitaovana ampitondranao seranan-tsambo. Izany dia manome antoka fa hisokatra hatrany ny seranana na dia aorian'ny famerenan'ny fitaovana aza. Rehefa manangana adiresy IP raikitra amin'ireo fitaovana ianao dia mila miditra amin'ny router.
Ankehitriny tsy maintsy miditra amin'ny router Eminent ianao. Ny router dia manana mpamatsy tranonkala, noho izany azonao atao ny miditra ao aminy amin'ny tranokala. Mety ho Google Chrome, Edge, Opera, na Internet Explorer ity. Mazava ho azy fa tsy maninona izay browser tianao hampiasaina. Ny adiresy IP an'ny router dia mety ho antsoina hoe vavahady tsy misy vidiny an'ny PC.